“Kulula ukwakha ubudlelwane obuqinile nezingane kunokulungisa umuntu omdala olimele” | News24
“Kulula ukwakha ubudlelwane obuqinile nezingane kunokulungisa umuntu omdala olimele”
Lamazwi acashunwa uFredrick Douglass ngowe-1855
UKUZIPHATHA okungemukelekile kungabonakala njengendlela izingane eziba yiyo uma kukhona okwenzekile, kodwa ngokuba sibe phambili singonga isikhathi esiningi namandla ethu ngokuthi singenelele ngokushesha uma sibona ushintsho noma izinkinga ekuziphatheni kwazo.
Ingane ungayifanisa nengadi yakho. Uma ukhula luyekwa ludla wonke umsoco wezimbali noma imifino. Kunjalo nesezinganeni zethu. Uma singaziqeqeshi ngendlela konke okuhle kuzona kuyaphela. Uma izitshalo zethu singazifaki izichumisi, ngeke zikhule kahle futhi izimbali kanye nemifino ngeke zichume. Izingane zidinga ukudla okunempilo ukuze zikhule kahle ngokomzimba. Uma izitshalo zingachelelwa ziyabuna futhi zife. Uma singathathi isikhathi sixoxe, sidlale sibuye sange izingane zethu nazo ziyafa ngokomoya. Ngakho ke sidinga isikhathi sokukhulisa izingane zethu njengoba sidinga isikhathi sokukhulisa, sichelele, sihlakulele sibuye sondle izingadi zethu. Isikhathi yisona sipho esikhulu esingasinika izingane zethu.
Ukuqonda ukuziphatha okunenselelo okuvezwa izingane zethu kungahamba umgama omude ekusisizeni sikwazi ukubhekana nakho. Njengokhula, sidinga ukubhekana nokuziphatha okunenselelelo kusukela ezingcanjini zakho sikususe, uma singenzi kanjalo kuyobuya kuvele futhi lokho kuziphatha.
Ukuziphatha okunenselelo kwengane kungasukela emuzwemi noma ekukholelweni okuthize, okufana nentukuthelo okanye ubuhlungu obusuka ezinhliziyweni zazo. Kufanele sithole imbangela yokuthi ingane ibe nentukuthelo noma ubuhlungu ukuze sikwazi ukuyisiza, ngaphandle kwalokho ngeke sikwazi ukuyisiza ingane ishinshe ukuziphatha kwayo.
Ngemuva kwakho konke ukuziphatha kunesidingo, uma lesisidingo singafezwanga, ukuziphatha okungamukelekile ngeke kuphele. Izingane nabasha bethu zifuna ukwamukelwa futhi zizizwe zamukelekile, noma ngabe lokho kusho ukuthi azenze izinto ezingamukelekanga ukuze zinakwe. Iqhaza lakho ukuthi ungabehluleli, kodwa basize bathole ukuthi yini le ebenza bazizwe ngaleyondlela bese uyabasiza futhi bathole indlela engcono neyamukelekile yokuveza imizwa kanye nezidingo zabo.
Uma izingane zakho zizizwa zamukelekile futhi zithandwa, ngeke ziziphathe ngendlela engamukelekile ukuze zifezekiswe izidingo zazo.
Kufanele ulungise ukuziphatha okungamukelekile ngokuthi ukwazi ukubona ukuziphatha okuyinkinga bese uyazifundisa ngakho izingane zakho, ngaleyondlela zizokwazi ukusebenzisa izindlela ezinsha nezamukelekile zokuziphatha ziyeke izindlela ezindala.
Qala ngokuzibheka wena nendawo ezihlala kuyo. Izingane ziyathanda ukulinganisa indlela esiziphethe ngayo thina bazali kanye nabantu abasondelene nazo njengabangani, othisha kanye nezelamani zabo. Shintsha okanye uzisize zizikhiphe ezimweni ezingalungile.
Kufanele sibe phambili ekulawuleni ukuziphatha kwazo ukuze sivikele ukuziphatha okungamukelekile, njenganokuthi izingane zakho ezimbili ziyaphikisana, okungenzeka zigcine sezilwa. Ngenelela ngokushesha uma uzwa impikiswano uzibonise ukuthi zingakuxazulula kanjani ukungaboni ngasolinye ngaphandle kokushayana. Zifundise indlela elungile.
Yiba nohlelo lwansuku zonke, lokho kunciphisa izinqumo ekufanele zizithathele zona nsuku zonke. Ukuba nohlelo oluhlelekile kuyosiza wena kwenze nezingane zakho zizizwe zivikelekile.
Oshicilelweni lwethu olulandelayo sizokhuluma ngezindlela eziyishumi zokulawula indlela yokuziphatha kwezingane ngendlela enozwelo nelungile
Uma kwenzekile waphuthelwa ungafunda kabanzi ku: www.gcf.org.za or www.southcoastfever.co.za